Shacabka iyo Waxgaradka Gobolka Hiiraan oo Soo dhaweeyay Saldhigii Baladweyne oo la furay – SBC
Shacabka iyo Waxgaradka Gobolka Hiiraan oo Soo dhaweeyay Saldhigii Baladweyne oo la furay
Posted by Webmaster on April 3, 2012 Comments
Qaar ka tirsan Waxragaradka iyo Shacabka gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay furitaanka Saldhiga Police-ka Degmada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan kaasi oo ay dib u howlgeliyaan maamulka DKMG ah ee Soomaaliya uu u soo magacaabay magaaladaas.
Bashiir Maxamed Cali oo ka mid ah Aqoonyahanada magaalada Baladweyn ayaa arinkani ku tilmaamay mid soo dhaweyn mudan islamarkaana ay ugaga fadhiyaan Maamulka cusub ee gobolka in uu wax ka qabto Amaanka iyo Garsoorka.
Nabadoon Axmed Dhicis isagana waa mid ka mid ah Nabadoonada Goobolka Hiiraan waxaana isagoo saxaafada la hadlaya uu sheegay in Talaabada Furitaanka Saldhiga Police-ka uu yahay mid hagaagsan oo dhinaca amaanka loo qaaday .
Dadka ku dhaqan magaalada ayaa iyana sidoo kale siweyn u hadal haya dib u howlgalinta Saldhiga Baladweyne iyagoona dhowraya sida uu amaanka wax ugaga qabto.
Dhowaan ayay aheyd markii maamul cusub loo soo magacaabay Gobolka Hiiraan kaasi oo iminka ku guuleystay dib u howlgelinta Saldhiga Police-ka Magaalada Baladweyne, isagoona iminka balan qaaday in ay ku xigaan furitaanka Xafiisyadii Garsoorka iyo bulshada.
Magaalada Baladweyne waxaa ku sugan Ciidamo aad u tiro badan oo sidax dhinac ah kuwaasi oo ay ku jiraan ciidamada Dowlada Itoobiya, kuwaasi oo dhankooda ka suga amaanka magaalada iyadoo mararka qaarna ay dhacaan weeraro lala damacsanyahay iyaga oo dhaca.
C/fataax Cismaan Maxamuud